Jeremaya 37 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
37 Eze Zedekaya+ nwa Josaya+ wee malite ịchị n’ọnọdụ Konaya+ nwa Jehoyakim,+ bụ́ onye Nebukadreza eze Babịlọn mere eze na-achị ala Juda.+
2 Ma ya onwe ya na ndị na-ejere ya ozi na ndị ala ahụ egeghị ntị n’okwu Jehova+ si n’ọnụ Jeremaya onye amụma gwa ha.+
3 Eze Zedekaya wee zie Jehukal+ nwa Shelemaya na Zefanaya+ nwa Measaya+ onye nchụàjà ka ha gaa gwa Jeremaya onye amụma, sị: “Biko, kpekuoro anyị Jehova bụ́ Chineke anyị ekpere.”+
4 Jeremaya nọ na-abata ma na-apụ n’etiti ndị mmadụ,+ n’ihi na ha atụbaghị ya n’ụlọ mkpọrọ.
5 Ndị agha Fero wee si n’Ijipt pụta;+ ndị Kaldia bụ́ ndị nọchibidoro Jeruselem wee nụ banyere ha. Ha wee hapụ Jeruselem laa.+
6 Okwu Jehova wee ruo Jeremaya onye amụma ntị, sị:
7 “Nke a bụ ihe Jehova, bụ́ Chineke Izrel, kwuru, ‘Nke a bụ ihe unu ga-agwa eze Juda, bụ́ onye ziri unu ka unu bịa jụọ m ase:+ “Lee! Ndị agha Fero bụ́ ndị na-abịakwute unu inyere unu aka ga-alaghachi n’ala ha, bụ́ Ijipt.+
8 Ndị Kaldia ga-abịaghachi buso obodo a agha, ha ga-eweghara ya ma gbaa ya ọkụ.”+
9 Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Unu aghọgbula mkpụrụ obi unu,+ na-asị, ‘Ndị Kaldia aghaghị ịla ma ghara ibuso anyị agha,’ n’ihi na ha agaghị ala.
10 N’ihi na ọ bụrụ na unu egbuo ndị agha niile nke ndị Kaldia, bụ́ ndị na-ebuso unu agha,+ ndị fọdụrụ n’ime ha abụrụ naanị ndị e merụrụ ahụ́ nke ukwuu,+ onye ọ bụla n’ime ha ga-esi n’ụlọikwuu ya bilie gbaa obodo a ọkụ.”’”
11 O wee ruo mgbe ndị agha ndị Kaldia hapụrụ Jeruselem+ n’ihi ndị agha Fero,+
12 na Jeremaya si Jeruselem gawa ala Benjamin+ ka o keta òkè n’ebe ahụ n’etiti ndị ya.
13 O wee ruo mgbe o rutere n’Ọnụ Ụzọ Ámá Benjamin+ na onye nche nke na-elekọta ebe ahụ, nke aha ya bụ Iraịja nwa Shelemaya nwa Hananaya, nọ n’ebe ahụ. O wee jide Jeremaya onye amụma ozugbo, sị: “Ọ bụ ndị Kaldia ka ị na-agbakwuru!”
14 Ma Jeremaya sịrị: “Ọ bụ ụgha!+ Anaghị m agbakwuru ndị Kaldia.” Ma o geghị ya ntị. Iraịja wee jide Jeremaya, kpọrọ ya bịakwute ndị isi.
15 Ndị isi+ wee weso Jeremaya iwe,+ ha wee tie ya ihe+ ma tụba ya n’ụlọ mkpọrọ,+ n’ụlọ Jehọnatan+ bụ́ odeakwụkwọ, n’ihi na ọ bụ ebe ahụ ka ha ji mere ụlọ mkpọrọ.+
16 Mgbe Jeremaya batara n’ụlọ ahụ nke nwere olulu,+ nke nwere ọnụ ụlọ ndị dị n’ime ya, Jeremaya nọrọ ọtụtụ ụbọchị n’ebe ahụ.
17 Eze Zedekaya wee zie ozi, e wee kpọpụta ya, eze wee nọrọ n’ebe zoro ezo n’ụlọ ya malite ịjụ ya ajụjụ.+ O wee sị ya: “Ò nwere ihe Jehova kwuru?” Jeremaya wee sị ya: “O nwere!” O wee sị: “A ga-enyefe gị n’aka eze Babịlọn!”+
18 Jeremaya wee gwa Eze Zedekaya, sị: “Olee ihe ọjọọ m mere gị na ndị na-ejere gị ozi na ndị a+ nke mere unu ji tụba m n’ụlọ mkpọrọ?
19 Oleezi ebe ndị amụma unu nọ, bụ́ ndị buuru unu amụma, sị, ‘Eze Babịlọn agaghị ebuso unu na ala a agha’?+
20 Ugbu a, onyenwe m eze, biko, gee ntị. Biko, nụrụ arịrịọ m na-arịọ ka i meere m amara,+ akpọghachila m n’ụlọ Jehọnatan+ bụ́ odeakwụkwọ, ka m ghara ịnwụ n’ebe ahụ.”+
21 Eze Zedekaya wee nye iwu, ha wee tụba Jeremaya n’ụlọ mkpọrọ dị n’Ogige Ndị Nche;+ a na-esi n’okporo ámá nke ndị na-eme achịcha ewetara ya otu ogbe achịcha kwa ụbọchị,+ ruo mgbe achịcha gwụrụ n’obodo.+ Jeremaya wee nọgide n’Ogige Ndị Nche.+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D24%26Chapter%3D37%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl